I-UPVC yeCasing Pipe kunye neMibhobho yeScreen abavelisi kunye noMthengisi
Imibhobho istili Jonga uluhlu Khuphela ikhathalogu
Kutheni imibhobho yeVINYL uPVC
I-Polyvinyl chloride (uPVC) engacwangciswanga, ilungele ulwakhiwo lwamanzi kakuhle.
Ukuxinana okuphezulu kwe-UPVC kubeka i-uPVC kuncedo ekusetyenzisweni kwimithombo yamanzi.
Imibhobho ye-uPVC inoxinzelelo olukhulu lwesivuno se-55N / mm. Ukuqina kwawo okuphezulu, kubavumela ukuba bafumane ukuqina okufunekayo, oku kuthintela ukungqubana okungafunekiyo kwimibhobho.
Imibhobho ye-uPVC iyamelana nazo zonke izinto ezichithwe kumanzi endalo omhlaba, kubandakanya iiasidi kunye neetyiwa. Ukunganyangeki kwamanzi kuluhlu lwe-pH phakathi kwe-2-12, imichiza esetyenziselwa ukucoca, ukukhula, kunye nokuhlaziywa kwemithombo (zombini izinto eziphilayo nezingaphiliyo) ayizichaphazeli le mibhobho.
Ukuba ngumbhobho wePlastikhi yokufaka iVinyl uPVC Casing PIpes ibonelela ngokunganyangekiyo okungafaniyo nokuchaphazeleka kwemichiza, kunye nokubola, okuhambelana nokuba yi-eco-friendly sisizathu esivela kwiVinyl Tubes Pvt. Ltd. Ukukhetha ukuvelisa.
Ukunyamezelana kobushushu obuphezulu kunye nobunzima bemibhobho ye-uPVC inegalelo kubasebenzi babo kunye nasekuhlawuliseni ngenqanawe kwaye benze umbhobho wePVC ukhetho kwimisebenzi enzima.
IVinyl Tubes inkampani yokuvelisa i-uPVC yenza imibhobho ye-uPVC ukuba ihambelane nayo yonke into efunekayo kwimibhobho kulwakhiwo lwezixhobo ezinokubakho kwicandelo legesi, ioyile, unkcenkceshelo okanye ukukhutshwa kwamanzi.
Imibhobho yoxinzelelo lweVinyl uPVC kunye nokufakwa kuye kwamisa ukuthembeka, kunye nengxelo eqinisekisiweyo kwicandelo lokuhambisa amanzi. Ziyilelwe zombini izicelo zokumpompa kunye noyilo lomxhuzulane.
Imibhobho yeHDPE / MDPE:
Ukusebenza ngokukuko, ubomi obude kunye nokuvuza okunguziro yile nto iVinyl HDPE / MDPE PIpes yaziwa ngayo. Yenzelwe oku: Izicelo zobushushu bomhlaba, iinkqubo zokudlulisela amanzi kuMasipala nakwimizi-mveliso, ukuhanjiswa kwegesi yendalo, Ukunkcenkceshela, ukulungisa umhlaba, iinkqubo zombhobho wamanzi amdaka, ukulungiswa kwemibhobho.
Inkqubo yeKhaya lePVC entle
IVinyl Tubes ivelisa iinkqubo ze-uPVC zokubeka kakuhle ezinokuthotyelwa kubunzulu ukuya kuthi ga kwi-600m. Ubomi beminyaka engama-50 + bubonelela abathengi ngesisombululo sexesha elide.
Imibhobho yeVinyl Piezometric yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zokuhlolwa kwesiza kunye nohlalutyo. Zijonge ngokuBalaseleyo kwiNdawo yokuBek'esweni, iSampulu yaManzi angaphantsi komhlaba, ukuJongwa kwaManzi aphantsi komhlaba kunye nokuFakwa kweLogger yeDatha.
Inkqubo yoKuhambisa amanzi kwi-Wellpoint:
Inkampani yokuvelisa imibhobho yePVC iVinyl Pipes iphuhlise iinkqubo zokuhambisa amanzi ezinokubonisa ukuba ziluncedo kakhulu ekwehliseni itafile yamanzi omhlaba kwimihlaba enobumbano kunye nokuvumeleka. Ifanelekile kumanzi acocekileyo apho inqanaba lamanzi kufuneka lehliswe hayi ngaphezulu kwe-15-20 yeenyawo. Iinkqubo zokuntywilisela amanzi kakuhle kwiVinyl zikuvumela ukuba upompe ukusuka kwiilitha ezimbalwa ngomzuzu kwisanti entle ukuya kumakhulu namawaka eelitha ngomzuzu ngamnye kwiigrabile nakwisanti erhabaxa.
Inamanqaku afanelekileyo ahlukaniswe ngokumbiwa kwaye aqhagamshelwe kwintloko eqhelekileyo. Oku, kunxibelelene nempompo enye okanye nangaphezulu. Ukombiwa okunzulu kuya kufuna amanqanaba amaninzi eenkqubo zemithombo yamanzi ngenxa yempompo.
Imibhobho yeVinyl ikhatshwa luluhlu lwezixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhobo ezincedisa kufakelo oluyimpumelelo lwemibhobho yeCPVC Casing. Ezi zixhobo ziyafumaneka kulo lonke uluhlu.
Inkqubo yeKhaya lePVC enzulu kakhulu
Kutheni le nto imibhobho yeVINYL ibhetri yakho ibalaseleyo?
Iiadaptha eziphezulu okanye izihlanganisi
Umbhobho Pipe neeAccessories 2
Umbhobho Pipe neeAccessories 3